Share your feedback for Dr. Javed Iqbal Farooqi
How to book an appointment with Dr. Javed Iqbal Farooqi ?
What is the fee of Dr. Javed Iqbal Farooqi?
What is the qualification of Dr. Javed Iqbal Farooqi?
Dr. Javed Iqbal Farooqi has the following degrees: FCPS(Med), FCPS (Gastro)
What is Dr. Javed Iqbal Farooqi's speciality and area of expertise?
Dr. Javed Iqbal Farooqi is specialist Gastroenterologist.
What are the practice timings of Dr. Javed Iqbal Farooqi?